I-China Runjin © Krunt ™ -N1200 Ukukhiqizwa Komshini Wokuqandisa Umshini Weqhwa | Runchen
Hlanganisa, iqhwa uvuse islurry nomoya ku-ayisikhilimu. Ikwazi ukukhiqiza ngokuzenzakalela u-ayisikhilimu ngekhwalithi efanayo. Uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa okufika ngezikhathi ezithile, ukukhiqizwa kwayo okusebenzayo, okunengqondo nokuqhubekayo kunganciphisa izindleko futhi kuqinisekise ukuzinza koketshezi.
Umshini wokuqandisa ngokwawo unomthombo obandayo, futhi abasebenzisi badinga kuphela ukuxhuma izinto zokupholisa amanzi, ugesi, igesi kanye no-ayisikhilimu (slurry) ukukhiqiza. U-ayisikhilimu impahla eluhlaza kanye nomoya kungena esigubhini esiqandayo ngepompo yokuxuba nge-valve yokungenisa umoya, kanti isigubhu esiqandayo sipholile ne-Freon compressor elethwe yodwa, nesikhuhli esishukumisayo esisesigubhini esiqandayo esixuba umoya ku-slurry, bese insimbi eyisicefe ekhethekile efakwe ocingweni lokususa olunyakazayo iyaqhubeka inyakazisa u-ayisikhilimu kusigubhu esiqandayo, no-ayisikhilimu uyakhipha epayipini elibonakalayo.
UFruntTM-N1200is i-Fruit Granule feeder futhi ihlangabezana ngokugcwele nezidingo zenhlanzeko yokudla. Imishini yakhiwa ngefriji compressor esezingeni eliphezulu nezingxenye ezisezingeni eliphakeme, eziklanyelwe ukuhlangabezana nezindinganiso eziqinile zenhlanzeko, ukuthembeka nokuqina. Zonke izingxenye ezixhumana no-ayisikhilimu zenziwe ngensimbi engagqwali engu-304.
L 50L / ihora 3 ～ 13amagaloni / ihora
Ivolumu yokukhiqiza isuselwa ezimweni ezilandelayo:
Izinga lokushisa lokufaka okuncibilikisiwe: + 5 ℃ 41 + 41 ° F, Izinga lokushisa elikhiphayo le-slurry: -5 （（+ 23 ° F ratio Isilinganiso sokukhukhumeza: 100%
Isithako esijwayelekile se-ayisikhilimu
Ushukela (sucrose) Isiraphu yeglucose Isiqinisi se-emulsion Okuqukethwe kwe-Condensate Amanzi Ingqikithi
I-compressor eyakhelwe ngaphakathi 9.35 KW × 2
Isisi sefriji I-R404 ejwayelekile
Okuqukethwe kwesiqandisi 5.3 Kg (11.68 LB)
I-condensing medium Amanzi
Imoto eshukumisayo 9.2 KW
Ukuxuba motor 0.75 KW × 2
Amandla aphelele 29.4 KW
Ukusetshenziswa komoya 2 m3/ h
Ukusetshenziswa komoya okucindezelweyo 6 ibha
Ukucindezelwa komoya, ubukhuluumthamo wokugcina amanzi 2.5 g / m3
Ukusetshenziswa kwamanzi okujiyile: amanzi ku-ishubhu lamanzi ≤ + 20 ℃ 6000 L / h
Ukuxhuma kokungena kwamanzi 1 "
Ukuxhuma kokuxhuma kwamanzi okujiyayo 1 "
Iphayiphu yokuxuba exubile, ngaphandle 38 mm 1 1/2 "ayindilinga
Ishubhu yokukhipha u-ayisikhilimu, ngaphandle 38 mm 1 1/2 "ayindilinga
Isilinganiso esikhulu sokukhukhumeza 100%
Langaphambilini Umshini wokuqandisa we-Runjin © Krunt ™ -N1000
Olandelayo: Umshini wokuqandisa weRunjin © Krunt ™ -N2000